Khilaafka u Dhaxeeya Madaxweynaha Iyo Ra’isal Wasaaraha Xukuumada Fadaraalka oo Cirka isku Shareeray+Akhriso Xog Hoose. - iftineducation.com
iftineducation.com – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Farax Shirdoon (Saacido) ayaa warar soo baxayay saacadihii u danbeeyay sheegayeen inuu madaxwayne Xasan Sheekh ka dalbaday inuu is-casilo.
Prof Cali Khaliif Galayr oo kamid ah Xubnaha barlamanka Soomaaliya lana kulmay Ra’iisul Wasaare Shirdoon ayaa sheegay inuu jiro Khilaafkaasi labada masuul u dhexeeya.
” Ra’iisul Wasaare Saacid Farax shalay ayuu bixiyey jawaabtii aheyd inuu is-caliso oo uga timid Madaxweynaha. Waxaana uu sheegay inuusan is-casileyn oo uu shaqada sii wadan doono” ayuu yiri Ali Khaliif Galeyr.
Mar uu ka hadlayey halka uu salka ku hayo khilaafkan iyo inuu mid ka mid ah labada Mas’uul midkoodna uu xaqiiqada kasoo ogaaday ayuu sheegay inuu Ra’iiul wasaare Saacid Farax xalay wada kulmeen oo uu u sheegay in laga dalbaday un inuu is-caliso islamarkaana laga diiday golihii wasiirada ee uu isku shaandheynta ku sameeyey.